ဒေါက်တာဟင်နရီလီဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်မှန်မှုခင်းများ – Pann Satt Lann Books
-ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘဝမှာ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို တစ်စိုက်မတ်မတ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်ပြီး စိတ်အားထက်ထန်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူ ဒေါက်တာလီနှင့် သူဖော်ထုတ်ခဲ့သောလျှို့ဝှက်နက်နဲ့သည့်အမှုများအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– ဒေါက်တာလီဟာ ဘယ်သူလဲ? ဘာကြောင့် ခေတ်သစ်ရှားလော့ဟုမ်းလို့ တင်စားသလဲ? ဘာကြောင့်ကမ္ဘာက သူ့ကို လိုအပ်ရသလဲ ? စသည်ဖြင့်သူ၏ဘဝအကြောင်းနှင့် သူဖော်ခဲ့တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှုများပါဝင်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
– စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာများကို နှစ်သက်သူများ၊ 1990 ပြည့်နှစ် မှုခင်းသိပ္ပံနည်းနာစနစ်များ ထွန်းကားခါက အမှုစစ်ဆေးပုံနှင့်အမှုသွားလာပုံများကိုလေ့လာလိုသူများအပြင် ပြစ်မှုကျူုးလွန်သူတို့အား ကောက်ကြောင်းပုံဖော်နည်းများကို တစေ့တစောင်းလေ့လာနီုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒေါက်တာဟင်နရီလီဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်မှန်မှုခင်းများ” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply